List of donors-MNRYP
Places To Visit In MNR
रक्त दान के हो ?
रक्त दान किन गर्ने ?
रक्त दान को महत्व र फाइदा
हरेक दोस्रो सेकेन्डमा कुनै न कुनैलाई रगतको आवश्‍यकता हुन्छ । तपाईको रगत एक समयमा एकभन्दा अधिक जिन्दगी बचाउनमा सहायता गर्छ । दुर्घटनाग्रस्‍त, पीडित, अविकसित नानी, जटिल अपरेसनमा सुतेका बिमारीहरूलाई पुरै रगतको आवश्‍यकता हुन्छ, जहाँ जाँचको पछि तपाईको रगत प्रत्‍यक्ष रूपमा प्रयोग हुन्छ। मानसिक आघात, रगतको कमी र अन्‍य शल्य चिकित्साका लागि बिरामीहरूलाई मात्र रातो रगत कणिकाहरूको आवश्‍यकता हुन्छ जो तपाईको रगतबाट अलग हुन्छ । पौष्टिक भोजन खाने ।
रक्‍तदान गर्नु भन्दा घ घण्टा पहिले पौष्टिक भोजन खाने ।
रक्‍तदानको पछि दिइने नाश्‍तालाई स्‍वीकार गर्ने किनकि तपाईले त्यो लिन महत्त्वपूर्ण छ।
यसको पछि तपाईलाई राम्रो खाना खाने सल्लाह दिइन्छ ।
रगत त्यो सजीव द्रव्‍य हो जसमा पुरै जीवन टिकेको हुन्छ । यसको ६० प्रतिशत द्रव्‍य र ४० प्रतिशत ठोस हुन्छ । द्रव्‍यलाई प्‍लाज्‍मा भनिन्छ जसमा ९० प्रतिशत पानी र १० प्रतिशत पोषक तत्‍व, हार्मोन इत्‍यादि हुन्छ र यो भोजन दवाईहरू आदिले धेरै छिटो बनाउँछ । तर रगतको ठोस हिस्‍सा, जसमा आरबीसी, डब्‍लूबीसी र प्‍लेटेलेट हुन्छ , त्यसनाई पुनस् बनाउनमा धेरै समय लाग्छ । यहाँ तपाईको भूमिका बन्दछ, जति समय एक बिरामीलाई यी तत्‍वहरू फिर्ता पाउनमा लाग्नेछ, त्यसमा उसको ज्यान जान सक्छ । कहिले(काही शरीरको अवस्था यिनीहरूलाई फिर्ता लिने स्थितिमा पनि हुँदैन, नाजुक हुन्छ । तपाई के जान्नु हुन्छ भने रगत उत्पन्न गर्न सकिँदैन, मात्र यसको दान सम्भव छ । अथवा मात्र तपाई त्यो व्‍यक्तिलाई बचाउन सक्नु हुन्छ जसलाई रगतको जरूरत छ । हरेक वर्ष भारतलाई २५० सीसी रगतको ४ करोड युनिटको जरूरत हुने गर्छ जसमध्ये मात्र ५ लाख युनिट नै उपलब्‍ध हुने गर्छ ।
यसमा कुनै शंका छैन, रक्तदान गरेपछि कस्तो मनमा सन्तुष्टि हुन्छ । किनकि, मानव रगतको कुनै विकल्प नै हुँदैन, त्यसैले यो एक महत्वपूर्ण काम पनि हो । जब तपाई रक्तदान गर्नुहुन्छ, त्यसले ३र४ अलग–अलग बिरामीलाई काम लाग्छ, जसले खुशी र सन्तुष्टिको भाव दिन्छ ।